Room No 305 (ဘီဒီအက်စ်အမ် ) – Grab Love Story
အလုပ်ဆင်းတော့ ၅ နာရီ ထိုးပီ။ ဒီနေ့က သောကြာနေ့ပါပါး နဲ့ တွေ့ဖို့ချိန်းထားသည်။ ပုံမှန်သောကြာနေ့ဆို ၄ခွဲ ကြိုဆင်း လေ့ရှိသော်လည်း ဒီနေ့ ရုံးအလုပ်တွေကြောင့် နောက်ကျနေပီ။ အချိန်တိကျလွန်းသော Papa ဒေါသကို သိ၍ အမြန်ထွက်လာရသည်။
အလွတ်ရနေသော အခန်းနံပတ်က 305 ။ ၁၅မိနစ် ပင် နောကိကျနေ၍ ပါပါး မကြိုက်သော ဓာတ်လှေကား အလွယ်စီး၍သာ ၃လွှာသို့ရောက်ခဲ့ပီ။ ချို့အလုပ်က ဘဏ်စယရေး။ အလုပ် အရ အလှုပ်အရှားနည်းသည်ထင်တယ် ၂၀ မကျော်ခင်က အဆီမရှိသော ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီအနည်းငယ်စုလာပီဖြစ်သည်။ နဂို ကပင် ဆူဖြိုးသောရင်မို့မောက်မောက် က ယခုဆို ခါးတို အင်္ကျီ နဲ့ အလုံးအထည် ပေါ်လွင်စွာ လှနေပါလိမ့်မည်။ ပါပါးက ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူပီပီ ချိုဝလာသည်ကို မကြိုက်ပေ။ အဲ့ကြောင့် သူ့ကွန်ဒိုကို လာတိုင်း ရိုးရိုးလှေကားကသာ တက်ဖို့မှာထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အချိန် မိနစ်ပိုင်း နောက်ကျရင်ပင် ဒေါသကြီးတတ်လွန်းလို့ ပါပါးကြောင့် စည်းကမ်းဖောက်ကာ ဓာတ်လှေကား သုံးလိုက်မိသည်။ ပါပါးသိမည်မထင်ပါ ။
အလွတ်ရနေသော password လေးကို စဉ်းစားစရာမလိုပဲ screen ပေါ်တင်လိုက်သည်နဲ့ ဂျက်ခနဲ တံခါးပွင့်သွားသည်။ Aircon ရဲ့ အအေးဓာတ်နဲ့အတူ ပါပါး အကြိုက်ဆုံး စံပယ်နံ့က အခန်းဝကပင် မွှေးနေသည်။ ပါပါးဆိုတာ ချိုရဲ့ ချစိသူပါ။ ဘီဒီအက်စ်အမ် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဆိုရင်တော့ သခင်ပေါ့။ အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူပါ ။ အသားညိုညို အရပ် အလယ်အလတ်  နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့။
အခန်းထဲ ဝင်လာလိုက်ကာ ဝရံတာ မှာ ရေချိုးခန်းဝတ်အင်္ကျီနဲ့ သောက်လက်စ အရက်ခွက်ကို ဘေးချကာ ဆေးလိပ်တို ကို ဖွာနေတဲ့ ပါပါး ဆီသွားလိုက်ပါသည်။
ချို= ပါပါး ရောက်နေတာကြာပီလား မွ
ချိုနှုတ်ဆက်စကားကို မပြန် ခပ်တည်တည်နဲ့ ဒေါသအရိပ်အရောင်များ လွှမ်းနေသော ပါပါး။
ချို= ပါပါး ချိုနောက်ကျလို့စိတ်တိုနေတာလား ဟင်။ ချိုက ဒီနေ့ အလုပ်က လချုပ်စာရင်း အပ်ရလို့ ပါပါးရယ် နော် ။
ပါပါး က သောက်လက်စ ဆေးလိပ်တိုတော့ ပြာခွက်ထဲ မီးညွှန့်ချိုးလိုက်သည်။ လက်မောင်းက ချိုကိုင်ထားတဲ့လက်ကို ဆွဲကာ အခန်းဘက် ခေါ်လာသည်၊ ထို့နောက် ဘီဒီအင်စ်အမ် ပစ္စည်းများစနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသော play room ထဲ ဆွဲခေါ်လာသည်။
.. . အခန်းထဲရှိ တခုထဲသော ထိုင်ခုံပေါ် ပါပါးထိုင်လိုက်ပီး ထိုင်ခုံရှေ့တွင် ချို့က မတ်တပ်အနေအထားဖြင့်။
ပါပါး= ချွတ်စမ်း မင်းအဝတ်တွေ ။
ချို=ပါပါးကလည်း ချို့ရုံးက ပြန်မလွှတ်လို့ပါ ဆို
ပါပါး= ငါက ချွတိဆိုချွတ် စကားမရှည်နဲ့
ချိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါ ။ ထဘီ ကို တဖြည်းဖြည်းချွတ်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် အင်္ကျီ က ကြည်စိ တွေကို ဖြုတ်ချနေမိသည်။ ယခုလို အခိုက်အတန့်မျိုးဟာ ပါပါးနဲ့တွေ့တိုင်းကြုံနေကျပေမယ့် ချို့အတွက် ရှက်ကြောက်နေဆဲပါ။
ပါပါး= ထဘီ ရယ် အင်္ကျီရယ်ပဲ မဟုတ်ဘူး အကုန်ချွတ်။
ချိုက နာခံသည့် သဘောနဲ့ ဆက်လက် ချွတ်နေမိသည် ။ ဆီးခုံမွှေးရေးရေး လေး က အသားဖြူဖြူကြားမှ ပေါ်ထွက်နေသည်၊ အညိုရောင် အသီးလေးများက မိုမောက်နေသည့် ရင်ဘက် ထိပ်ပိုင်းမှာ ဆူနေပေသည်။
ပါပါး= ပေါင်ကားထား စမ်း ။ မင်းကို အမိနိ့မနာခံ တဲ့အတွက် အပြစ်ပေးရမယ် ။
Room No 305 (ဘီဒီအက်စ်အမ်) အပိုင်း ၂
ပါပါး= လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးပီး ရှေ့ကို ထုတ်ထား
အပစ်လုပ်ထားမိသူမို့ ပါပါး အမိနိ့အတိုင်းနာခံနေမိသည်။
. ပါပါးက အခန်းထဲရှိ ကြိုးအမျိုးအစား ၅မျိုးထဲက နံပတ် ၃ ကို ယူလာပီး ချို့လက်ကို ပူးချည်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကြိုး ၏ အခြားအစွန်းစ ကိုမျက်နှာကျက် ထုတ်တန်းရှိ သံကွင်း ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပီး ချည်လိုက်သည်။ ချို့လက်နှစ်ဖက်လုံး အပေါ် မြှောက်ကာ ကြိုးတုပ်ထားသဖြင့် နဂိုကပင် ဆူဖြိုးနေသော ရင်မွှာနှစ်စုံက ပို၍ပင် ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့ပေသည်။
. ပါပါးက နံရံတွင်ချိတ်ထားသော ကြိမ်လုံးများထဲမှ နံပါတ်၆ကြိမ်လုံးကို ယူကာ လေထဲတွင် အစမ်းရိုက်ကြည့်နေပေသည်။ ထို ဝှီ ဝှီ ဆိုသောအသံများသည် ချို့ နှလုံးခုံသံများကို အရှိန်တင်ပေးနေပေသည်။
ပါပါး= မင်း ဒီနေ့ဘယ်နှမိနစ် နောက်ကျလဲ ဖြေစမ်း
ချို= ၁၅ မိနစ်ပါ ပါပါး ချိုအလုပ် က စာရင်းချုပ်နေလို့ရလို့ပါ ပါပါး
ချို= အား ပါပါး
ပါပါး= မင်းကို မမေးတာဖြေရင် အပစ်ထပ်ပေးတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်နော်
၁၅မိနစ်နောက်ကျ တာအတွက် ဘယ်နှချက်အပစ်ပေးခံရမလဲ ပြောစမ်း
ချို=၁၅ ချက်ပါ ပါပါး
ပါပါး = အေး မှန်တယ်
ပါပါးက ကားထားသောချိုပေါင်ကြား ထဲကို ကြိမ်လုံးနဲ့ ပွတ်ကာ မိနိးမအဂါင်္နှုတ်ခမ်း ကြားထဲမှာ ရှေ့တိုးနောပ်ဆုတ်လုပ်နေသည်။ ထို့နောက် နောက်က ဖက်ကာ ချိုနို့အုံ ကို ဆွဲကိုင်ပီး ချေနေသည်။ ကျန်တစ်ဖက်က မိန်းမအဂါင်္ကို ပွတ်နေသည်။ သားရေလက်အိတ် ဝတ်ထားသောကြောင့် မိန်းမအဂါင်္ တစ်လျှောက် ယားလာကာ ရင်တွေပါ ဝုန်းဒိုင်းကျဲနေတော့သည်။ ထို့နောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လာရပ်ကာ နို့သီခေါင်းကို လက်ညိုး လက်မ နှစ်ချောင်းထဲဖြင့် ဆွဲလိုက်သည်။ အလွတ်မပေးပဲ ဆွဲနေသောကြောင့် ချိုနာကျင်လာသည်။
ချို။ ပါပါး နာတယ် အားးး ပါပါး😣
Room No 305 (တတိယပိုင်း)
ပါပါး = ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း မအော်နဲ့
ထိုသို့ဆိုရင်း ပါပါးက နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ခါးပတ်များစွာထဲမှ အသားရောင်စိုပြောင် နေသော ခါးပတ်ကို ယူ၍ ထက်ဝက်ခေါက်လိုက်ပီး သံကွင်းဘက် အစကို လက်နှင့်စုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ တခါမှ မရိုက်ခံဖူးသည့် ခါးပတ်ဖြစ်၍ ချို့ရင်တွေ ခုန်နေမိတာတော့ ညာမရပေ။
ပါပါး= ကဲ စမယ် ဘာကြောင့်အပစ်ပေးတယ်ဆိုတာ သိလား ချို
ချိုအလျှင်အမြန် စဉ်းစားနေမိသော်လည်း ခေါင်းထဲ ဘလာ သက်သက်သာ ။
ပါပါး= ကဲ မသိချင်အုန်း အဖြေ မရမချင်း မေးတခွန်းဆို တစ်ချက် တီးမယ်
ချို=အားးးး အမေ့
အားပါပါ လွဲရိုက်လိုက်သောကြောင့် ချိုတင်ပါးထက်မှာ အနီရောင် အလျှိုးရာကြီးပေါ်လာပီး အသားကပါ ဖောင်းကြွလာပီ။ အမေ့ဟူသော အာမေဒိတ် အသံနဲ့အတူ ချိုတကိုလုံး ပူထူသွားပီး ချွေးများပင် စိုလာသလိုလို ဖြစ်လာသည်။
မိမိအပစ်ကို မသိလိုက်မိခြင်းက ချို့အတွက် ဒုတိယ အလျှိုးရာ ကို တင်ပါးမှာ ထပ်ပေးခံလိုက်ရခြင်းပင်။ နောက်တတိယ တချက်
ပါပါး= ကဲကွာ ကဲကွာ (ဖြန်း ဖြန်း) ငါ့ စကားကိူ ခေါင်းထဲ မမှတ်ထားချင်အုန်း
မိချိုနင့်နောက်တချက် မရိုက်ခံရခင် စဉ်းစားစမ်း
မျက်ရည်ပင် ဝဲစပြုလာပီမို့ ထပ်မနာကျဉ်ချင်တော့ပါ ။ အလျင်အမြန် စဉ်းစားနေမိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ချိုသတိတချက်ရလိုက်သည်
ချို= ချိုချိုဓာတ်လှေကားစီးလာမိတာပါ. ပါပါး တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် ချိုမှားပါတယ်. ခွင့်လွှတ်ပါ ပါပါး
ပါပါး= ကဲ အဲ့တော့ နောက်ကျတာ ၁၅ ချက် ၊ ဓာတ်လှေကားစီးလာတာ ၁၀ ချက် ပေါင်း ၂၅ ။ ဘာ ဖြေရှင်းချက်ပေးအုန်းမလဲ
ချို= မပေးတော့ပါဘူးရှင်. ပါပါး ပေးသမျှ အပစ်ဒဏ် ခံယူပါ့မယ် အီးး ဟီးး
ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်မှုကြောင့် မျက်ရည်များတသွင်သွင်ကျလာကာ ငိုမိတော့သည်
ပါပါး= အသံမထွက်နဲ့ နင့်အပစ်နဲ့နင်ပဲ လိမ္မာရင် ငါဘယ်လို ဆုချလဲ နင့်အသိပဲ ။ ကဲ စရေမယ် အသံထွက်ရေ ။ တစ်ချက်ရိုက်ပီးရင် တစ်ချက်ပါ သခင်ကြီး လို့အော် ကြားလား ငါမမှတ်နိုင်ဘူး မှတ်ဖို့လည်း မအားဘူး။ ကဲ စပီး ဖြန်း
ချို= တစ်ချက်ပါ သခင်ကြီး 😣😣
ပါပါး = ကဲကွာ ဖြန်း
ချို= အားး ပါပါး အီး ဟီးး ဟီးး. နှစ်….. နှစ်ချက်ပါ သခင်ကြီး
ပါပါး = မလှုပ်နဲ့ ပိုနာမယ်နော် မလိမ္မာချင်အုန်း ကဲကွာ
ချိုတက်ုလုံး တုန်လာပီး ချွေးစီးများပါ ပြန်လာသည် ။
ချို= သုံးချက်ပါ သခင်ကြီး အီးး ဟီးး ဟီးး
ပါပါး= မတ်မတ်ရပ်စမ်း မိချိုငါ ဒေါသမထွက်ချင်ဘူး
ချို= အားး ချိုမှားပါပီ ပါပါးရယ် တော်ပါတော့နော် ချိုမှားပါတယ်
ချို= ၂၀ ချက်ပါ သခင်ကြီး အီးး ဟီးး ကြောက်ပါပီ ပါပါးရယ် ချိုကို သနားပါနော် အီးးး. ဟီးးး နောက်အပစ်မလုပ်တော့ပါဘူး တောင်းပန်ပါတယ် ပါပါးရယ်
ရွှမ်း ချွေးစိုခန္ဓကိုယ်ကို ရိုက်နေသောကြောင့် ခါးပတ်လည်း ချွေးနဲ့ပေါင်းပီး ကြာပွတ်ကို ရေစွတ်ရိုက်သလို တချက် ဆို တချက်မှန်း သိသိ အလူးအလဲ ခံနေရသည်။ ဘဏ်ဝန်းထမ်း အလှပဂေး ခင်ချိုနွယ် တင်ပါးလည်း အလျှိုးရာ ပလပွနဲ့ နီရဲကာ သွေးခြေပင် ဥနေပေသည်။ နောက် ဆုံးငါးချက်သည် ချိုရဲ့ ပေါင်သားများကို ကြိမ်လုံးဖြင့် ရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။.
ပါပါး= ကဲ ဘယ်လောက်ရောက်ပီလား မိချို
ချို= နှစ် ဆ ယ့် ငါး ပါ သခင်ကြီး (ပလုံးပထွေး)
ပါပါး= ကဲ တော်တယ် ဘေဘီရေ ပါပါး ကို ရက်စက်တ်မထင်ပါနဲ့ကွာ။ ပါပါး က ကိုယ့်ချစ်သူက က်ိုယ့်စကားနားမထောင်ရင် အလိုလိုဒေါသ ထိန်းမရတာကွ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကွာ
Room No 305 ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
မောဟိုက်ပင်ပန်းနေတာတစ်ကြောင်း ၊ ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်မှာတွေက တစ်ကြောင်း ချိုခေါင်းပင်မထောင်နိုင်တော့ပေ။ ပါပါးးက ချိုကို ချီထားတဲ့ ကြိုးကို အနည်းငယ် ဖြည်ချပေးလိုက်တော့ ဒူးထောက်ကျသွားသည်အနေအထားဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက် ကြိုးကိုပြန်ချည်ထားလိုက်သည် ဒူးထောက် လက်မြှောက်အနေ အထား အတိုင်း ခေါင်း ငိုက်စိုက်ကျနေသည်။
ပါပါး= ကဲ ဘေဘီ ကို လိမ္မာတဲ့အတွက် ဆုချမယ်
ထိုသို့ဆိုရင်း ပါပါးက သူ့ပစ္စည်းကို မျက်နှာနားတေ့ပေးသည်။ ပါပါးက ချို့မျက်နှာကို ဆွဲမကာ ပါးစပ်ထဲ လက်ထည့်သည်။ ထို့နောက် ပေသွားသည့် သားရေ တွေနဲ့ ပျော့နေသေးသည့် သူ့ပစ္စည်းကို ရှေတိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နေသည်၊
ပါပါး = ဘေဘီ ပါးစပ်ဟထား ကိုယ့်က်ု စုပ်ပေးစမ်း လိမ္မာတယ်
ချိုပါးစပ်လေး ဟပေးမိသည်။ အရှည် ၈လက်မ ခန့် လုံးပတ် ၅ လက်မ ရှိသော ဖြူဖြူအချောင်းကြီးက ချိုပါးစပ်ထဲ တလုံးတခဲ ဝင်လာပီး လည်ချောင်းမှာ လက်ထောက်နေသည်။ သို့သော်အဆုံးထိ မဝင်သေး။ ပါပါး က သူ့ပစ္စည်းကို ပြန်ထုတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တစ်စက္ကန့်ပင်မခြား ပြန်ဝင်လာကာ လည်ချောင်းထဲ ကို အဆံ့မပြဲ စောင့်ဝင်ပီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ ချိုလက်က တုတ်နှောင်ခံထားရ၍ လှုပ်၍ ပင်မရပါ ။ မျက်နှာကြီး နီရဲတက်လာကာ အသက်ရှူပင် ကြပ်သွားသည်။ စက္ကန့်မလပ်. ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်ဖြင့် ပါပါးပစ္စည်း လှုပ်ရှားနေသည်။ တံတွေးပင် မြိုချ ဖို့အချိန်မရှိအောင် ပါပါးက အလုပ်ပေးထားသည်။ တံတွေးများက ပါးစပ်အတွင်း ပြည့်သိပ်ကာပါပါးပစ္စည်း ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း
ချိုရင်ဘတ်တွေပေါ်အဆက်မပြတ်ကျလာပေတော့သည်။ အာ့အား အု အု ခရူး ခရူး
ပါပါး ကတော့ မျက်စိမှတ်၍ နှုတ်ခမ်းကိုက်ထားပီး ချိုဆံပင်ဆွဲကာ အရပ်မနား အရသာခံနေပီ။ ချိုပါးစပ်တခုလုံး ထုံကျင်လာကာ အသံရှုကြပ်လာသောကြောင့်အတင်းရှုန်းမိသည်။ ပါပါး က ရပ်လိုက်သည်။ ပီးတော့ ချို့ရှေ့မှာ ငုတ်တုပ်ထိုင်ကာသားရေတွေ ရွှဲ ချို့နို့တွေကို ကြည့်နေသည်။
ပါပါး= လှလိုက်တာ ဘေဘီရယ် မင်း ပါပါးကို ထားမသွားရဘူးနော်
မင်းဟာ ပါပါးရဲ့ အပိုင်ပဲ
ညာဘက် နို့အုံကို သားရေလက်အိပ်စွပ်ထားသော လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ပေးနေသည် ။ အခြားလက်တစ်လက်က အခြားနို့ရဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ချေပေးနေသည်။
ချို= ပါပါးရယ် အား ဟာ ဟာ ပါပါးရယ် ကောင်းလိုက်တာ ပါပါးရယ်
ထို့နောက် ပါပါး က ချို့နောက်ဘက်သို့ရောက်သွားသည်။ Vibrater ကို သွားယူကာ ချိုနောက်ဘက်မှ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။
ပါပါး = ပေါင်ကားထား ဘေဘီ နတ်ပြည်သွားကြစို့
နောက်ကနေ ချို့မိန်းမအဂါင်္ ကို လက်ဖြင့် ပွတ်ပေးသည်။ထို့နောက် vibrater. ကို သုံးကာ အရသာဖုလေးကို တုန်ခါစေတော့သည်။ ပေါင်ကြီးကားပီး ချိုလှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာသည်။ ချိုဖင်ကြွက်သားတွေလည်း ရှုံလိုက် ပွလိုက်နဲ့ vibrater ရဲ့အရသာ ကို ခံယူနေသည်။ ပါပါးက ချိုပန်းဖူးလေးရဲ့အတွင်းကို လက်နှစ်ချောင်းသွင်းလိုက်ပီး vibrater ကို အရသာဖု ပေါ် တင်ပေးထားသည်။ ချိုမခံစားနိုင်တော့ ပါ ။ အရမ်းကို ကောင်းလွန်းနေသည်။
ချို=ပါပါး ရယ် ချိုမရတော့ဘူး ထွက်ခွင့် ပြုပါနော် ပါပါးနော်
အား ဟားဟား အမလေး ပါပါးရယ်
ချို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် အကြောတွေ တစ်လျှောက် အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားလိုက်ရသည်။ တကယ့်နတ်ပြည်ပါပဲ ။ ချိုအားကုန်သွားသည်ထင်၏ မလှုပ်ချင်သလို နုံးချိသွားသည်။ ပါပါး က ကြိုးကို ချည်ပေးကာ သဘက်တစ်ထည်လာခြုံပေးသည်။ သံပုရာ တစ်ခွက် ချိုထံ လှမ်းပေးသည်နှင့် ချိုအငမ်းမရသောက်နေမိသည်။ ပါပါး က ချိုကို ဖက်လိုက်ပီး ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားသည်။ ဆံပင်လေးတွေကို နမ်းကာ. ဘေဘီရယ် ချစ်လိုက်တာကွာ မွ😍😍